Waamicha Qabsa’oota Bilisummaa barbadanf
Illaalchi Amanta leelisu, Ganda, Ayyanalalatuma, Fayyida fi Tefoozo barbadun dhabamsisuf waraaqisa jijirama fi bilisummaa gegesuu qabana !!!.
Diaspora kaleesa maqa qabsoo fi rakko Oromoo himate buden argate hara qabsoo Oromoo irrati qoosee, Amata fi Gosan wal ijare qabsoo qeerroo itti du’aa jirtu boorcuuf hamle hin qabu. Diaspora Hamilee qabsa’oota biyya keessa cabse kun Qabsoo Qeerro gegesuu miti VISA Oromoo ilee argate Oromiyaa seenu hin qabu, rakko Somalia sun nuti fiduu keesuma leelistoon amanta.Diaspora waraaqisa of irrti gegesuu qaba yeeroo jeenu Oromummati deebiyuu qaba. Nu gaafa dhalane Kiristiana ykn Isilama ykn Waaqeeffataa miti Oromoo dha.
Oromoon seena, seera , jeecha Oromoo beeku qaba. jeecha Oromoo kana hubadha "Ijoolee gaafa isheen Wiicii ajeefte dhisan Jabii Ajeefti, yoo dhisan korma ajeefti yoo dhisan nama ajeefti" jeedha. Oromoon waan beekuu qabnutu jira. Oromoo safuu qaba, seeran bula, iftoomina qaba,seeran wal bulcha siirna gadaan. Diasporan feedhii dhunfaf dhaabate fayyida dhufan wal ijaree Olola fi jeequmsa biyya alati humee qabsoo qeerroo biyya keessa hamilee cabsuu irra dhabachuu qaba.
Bartoota darban OMN kayyoo isaa male waan feedhe yeeroo walti laqama ture, Oromoo Ganda fi Amantan qoode yeeroo keesumessa ture, saganta OSA fi Saganta ABO irraati argame yeeroo maalaqa sasabacha ture hundi ni caaliftan, yeeroo nami tokko Miseensoota boordii, Ogannoota fi gazeexeesitoota akka barbade ari'acha ture hundi ni caalise, yeeroo ini oduu biyya keessa dhufu ilee kan ganda kana hin fudhu kan abalu hin fudhu, kan ABO hin fudhu, Oganoota dhaabilee siyyassa Oromoo hunda hin dubsuu yeeron jeecha ture Oromoo maliif caalise. Media OMN hoji media fi hoji siyyasa yeeroo walti laquu Boordiin OMN maliif hoji media hin dageesine, maliif gazeexeesitoota qoofa adda basse FB irrati hin bareesina jeedha? Umata kana akkasti tufachun garii miti.Ogani OMN Qabsoota Oromoo hunda yakke fi ukgure garuu Junedin Sadoo baratoota Oromoo fixaa ture fi Oromoo Kumatama hisise kumataman biyya ari'achise goota goodhachun cuubuu dha. Ijoole yeeroo sun barumsa irra ari'ataman du'an, qama hiratan Junedin Sado ni yaadatu. Oromoo haqa jiru qoorate dogogra jiru siireesu bate Ganda fi Gosan rakko waliif aguge adeemun isaa bala akkasif nama ga'aa ama seereesu nama rakkisa.
Nami yeeroo qabsoo kana keessa akkasti Maalaqaa fi ofitumma akkasin himatamu kana irra darbe amoo sa'a booqoona keeti ilee FB irrati yaada dhunfa kee hin bareesin jeedhe nami nama uguru, biyya demokrasi keessa ta'ee nami mirga deemokrasi nama moolqu egeren isaa dhala nama hundafi garii miti. Waraaqan Bilisumma saba isaaf hojeetuu minda argatuu fi Abali fudhatuu irrati malaaaqa uumata irra walti qabumu irra 10% fudachun nama salfachisa. Namoon Qabsoo keessa waga 40 jirantu jira jari kun Malaaqa Presint 10% fudhachuu dhisatu ufata ilee hin qaban. Yeeroo qabsoo kana keessa nami feedhi dhunfa fi maalaaqa horachuu barbadu lammi keenya ni baleessa male bilisumma hin basuu, nami akkasi qabsoo irra fagefamuu qaba. Qabsa’oon dhuga jireenyi isaan nama gadisisa. Wagoota 10 ol kan ufata tokko ufatutu jira, wayee ufata fi nyata isaan yaadan hin beekan namoota kana qamanin beeka bira ta'ee, waliin jiradhe argeera. Oromoo biyya USA fi Europe jiru wa’ee qabsoo waan dagate nati fakkata qabsoo jeechun dorgoomi Filaannoof USA ykn Europe keessati goodhamu fakeesan ilaala jiru kun jijiramu qaba bakka hundati waraaqisa jijirama fi bilisummaa gegesuu qabana.
Oromoo of irrati waraaqsa gegesuu qaba, Amanta kami iyuu jala of bilisoomsuu qaba; Ganduma jala of basuu qaba, Amala Feedhi Angoo fi Feedhi Malaaqa dhiise Amala waraaqa qabachuu qaba. Ilaalcha Habashuma fi diina jala adeemuu irra of Bilisoomsuu qaba,Tokkummaa saba Oromooti Amanu Qaba.Qabsa'aa yeeroo ijaruu 100% Oromoo kan ta'ee fi Oromummaati 100% kan amane ta'uu qaba, Bilisummaa fi Walabummaa Oromiyaati Amanu qaba. Qabsoon biyya keessa qoofa ijaramee fi hidhannoo gegefamun uumani keenya bilisomuu akka qabu beeku fi amanu qaba. Qabxiilee kana amansiifne Qabsa'oota amala waraqa qaba qabsooti hirirsuuf waraaqisa cimmaa gegesuu qabna. Maatii keenya naannno keenya fi degertoota keenya Garbumma Amanta Araba fi Farajiin jonji'aa jiran amanta kaleessa fudhata Oromummaa caalisifachuu feedhe cabsuu qabna, Amantan badii aduunyaf ilee sababa akka ta'ee dargagoon keenya baree barsisuu qaba.
Dhaabbilee Oromoo miseensoota isaan lammii Oromoo qulqulu ta'uu isaa fi Oromummaa fudhachuu isaa siirti qoorachuu qabu, keesumma diasporan Oromoo nami bayen ID argachuuf lammi Oromoo fayadame harka caaluu dha warii kun dhaabilee Oromoo keessati ijaraman jiru diinaf hojeetu beeka. Walumagalatii qabsa’oon Oromoo wacaa fi jeequmsa diasporan Afarsa jiru kanaaf gura keenuu dhifne of keessa fi of alati diina irrati qabsa’uu qabana. Siirni TPLF kufe jira kan isaa jirachisa jiru dadhabina keenya fi tokkumma dhabuu keenya. Bareesitoon seena biyya lafa wa’ee rakko Oromoo waa isaan irrati waliif galan Oromoo tokkummaa dubu isaati Oromoon gaafa tokko ta’ee Abbaa Gaanfa Afrika ta’uu akka danda’uu mirkanessan jiru. Dhamssa hayyulee kana akka salphati ilaaluu hin qabnu, habasha jalati ijaramuu OPDO waliin seena gurachaa keenya lamafa irra deebiyuu hin qabnu. Dhaabbilee Oromoo Bilisummaa fi Walabummaati amanan tokkumman qabsoo biyya keessa irrati himachuu qabu, qabsoon biyya ala remoot kontroliin deemu isaa iyuu hin ga’uu. Dhaabii siyyasa biyya alati dhaabbate biyya seenu yaaluu Oromoo ni diiga male hin ijaruu, sababin isaa suummi habasha kara irrati itti makate biyya seena.